Shiinaha Soogalootiga cusub ee rasmiga ah 360 apai genie shaashadda kamaradaha ayaa wajihi doonta raadraaca tooska ah ee toogashada taleefanka gacanta ee haysta Soosaaraha iyo Warshad | Buug-gacmeedka
Soo-galootiga cusub ai waxay awood u leeyihiin 360 apai genie shaashadda kamaradda wajiga wajiga raadraaca tooska ah ee istaadka taleefanka gacanta haysta
1. Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida - Wajiga & Ujeedo raadinta, bartilmaameedka waqtiga dhabta ah, illaa iyo inta laga xusho bartilmaameedka kamaradda, istaaggu wuxuu raaci doonaa bartilmaameedka si loo dhamaystiro toogashada muuqaallo badan.
2. 360 ° wareejin aan dhamaadka lahayn - Haystaha wareegga wareegga Horizontal 360, oo si otomaatig ah loola socdo iyadoon xagal dhiman. Isku darka nidaamyada xasilinta muuqaalka iyo algorithm aragtida kumbuyuutarka ayaa ka dhigaysa raadraaca mid fudud
3. Shaqo Joogto Dheeraad ah - Jiil cusub oo algorithm ah oo tamarta keydinta waxtar leh, oo ay weheliso awood aad u hooseysa oo loo yaqaan 'Bluetooth 5.0 chip', oo bixisa 50-saac oo shaqo joogto ah. Ku tiirsanaanta ku habboon baytariyada AA, weligaa ma seegi doontid tallaal ama qabasho.
4. Hawlgal Fudud - Isku xirnaan otomaatig ah iyada oo aan la diiwaangelin iyo casharro adag. Keliya isticmaal taleefanka gacanta si aad u soo dejiso barnaamijka APAI GENIE oo aad u furto, ka dibna sii wad furaha [Power On] ee istaagga 5 ilbiriqsi, si otomaatig ah ayuu ku xirmi doonaa. (Nidaamka taageerada iOS 10.0 iyo nooc cusub, Android 8.1 iyo nooc cusub).
360 degree rotationg auto raadraaca smart AI booska haysta taleefanka gacanta
Xamuulka ugu badan
Taageerada cabirka taleefanka
360 darajo wareeg aan xad lahayn
37 digrii rogrog toosan ah
37 darajo oo hoos u taagan
3pcs 1.5V baytariyada qalalan alkaline
Telefoon is waafajin kara
IOS 10.0 iyo wixii ka sareeya & Android 8.1 iyo wixii ka sareeya
Habka raadraaca sheyga, qaabka raadraaca wajiga Xakamee taleefanka smart smart toogashada
1. S: Sidee ayay shirkaddaadu u qabataa xagga ilaalinta tayada?
A: Waxaan sameynaa 3 jeer kormeerka tayada adag ee adag ka hor rarka si aan u hubino tayada ugu fiican.
2. S: Ma aqbali kartaa amarro yaryar?
J: Haa, amarro yaryar ayaa la aqbalaa. Kaliya nala soo socodsii inta qaybood ee aad u baahan tahay.
3. Miyaad daabacan kartaa astaanta alaabta? Ku dheji sumadda iyo markabka Amazon FBA bakhaarka?
Sure.Waan ku daabacan karnaa astaantaada badeecada adoo daabacaya xariir-shaashad iyo daabacaadda laser-ka ee aad dooratid.Waxaan ku dhejin karnaa badeecada oo waxaan si toos ah ugu rari karnaa bakhaarka Amazon FBA.
4. S: Waxaan jeclaan lahaa inaan soo booqdo badeecadaada iyo xigashooyinkaagii ugu dambeeyay, sideen ku heli karaa?
J: Ku soo dhawow inaad si toos ah noola soo xiriirto adoo ku diraya khadka tooska ah ee internetka, baaritaan ama Whatsapp wixii ku saabsan buugyaraha ugu dambeeyay Noo soo dir baaritaan ama email toos ah ayaa sidoo kale la soo dhaweynayaa.
5. Maxaad u Xulaysaa Alaabtayada?
1. Tayo Sare AAAA Tayo.
2. Qiimaha jumlada warshada.
3. Heerarka imtixaanka xirfadeed, oo ay kormeereen kooxda xirfadda leh ee QC.
4. Badeecad cusub oo isbeddelaysa iyo moodel iibin kulul ayaa si joogto ah kor loogu qaadayaa.
5. Maraakiibta degdega ah.
Hore: Android Tablet 10 inch Quad Core 1GB + 16 GB / 2GB + 32GB Tablet PC Iyadoo Taleefanka Wicitaanka Taleefanka Taageerada OEM Brandized Customized
Xiga: Macaroon A6s Dhago-la-aan Wireless ah loogu talagalay Redmi Airdots Earbuds Bluetooth 5.0 TWS Madax-weyneyaasha Buuq ka noqoshada Mikrafoonka casriga ah
Auto Smart toogashada Selfie Stick
Smart Auto Shooting Phone haya
Kaararka Salaanta Gaarka ah ee Kaararka LCD ee 7inch Suuqgeynta ...
Caan caan ah 15 inch loop play sawir sawir digi ...